Borussia Dortmund oo si cad u qeexday qorshaha ay ka leedahay mustaqbalka Erling Haaland iyo Jadon Sancho… (Mid la iibinayo iyo mid sii joogi doona) – Gool FM
Borussia Dortmund oo si cad u qeexday qorshaha ay ka leedahay mustaqbalka Erling Haaland iyo Jadon Sancho… (Mid la iibinayo iyo mid sii joogi doona)
(Dormund) 05 Abril 2021. Xiddigaha kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ee kala ah Erling Haaland iyo Jadon Sancho suuqa xagaaga ee soo aaddan loo baadi goobayaa si xad dhaaf ah, waxaana kooxda Jarmalka ka dhisan ay caddeysay qorshaheeda ku aaddan mustaqbalka xiddigahan.
Sancho ayaa lala xiriirinayaa kooxaha ka ciyaara Premier League sida Manchester United, halka Haaland uu bartilmaameed u yahay inta ugu badan kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub.
Si kastaba ha ahaatee, madaxa fulinta ee kooxda Dortmund ee Hans-Joachim Watzke ayaa xaqiijiyay in Haaland uusan iib ka ahayn kooxdooda, balse Sancho dalabaadka u imaanaya ay dhageysan doonaan xagaagan.
Watzke ayaa sheegay in wakiilka 20-jirka weerarka dhexe ka ciyaara ee Mino Raiola ay kala hadli doonaan mustaqbalka laacibkan, sidoo kalena uu qayb ka yahay qorshahooda xilli ciyaareedka dambe, balse taas baddelkeed ay daneynayaan inay ka faa’ideystaan dalabaadka u imaanaya xiddiga reer England.
“Qorsho isku mid ah kama lihin, waxaan la hadli doonnaa Erling, Aabbihiis iyo wakiilkiisa Mino Raiola, waxaanna rabnaa inuu isagoo faraxsan nala sii joogo oo uu goolal u dhaliyo BVB” ayuu Watzke u sheegay DAZN.
“Jadon waxa uu nala joogay in ka badan inta ee Haaland nala joogo, isaguna weynu la hadleynaa.
“Haddii aan helno dalab cajiib ah waxaan kala hadli doonnaa ciyaaryahanka iyo wakiilkiisa sida caadiga ah” ayuu hadalkiisa ku sii daray madaxa fulinta kooxda Dortmund.
Jadon Sancho ayaa xagaagii lasoo dhaafay ahaa bartilmaameedka koowaad ee kooxaha England xagaagii hore, hase ahaatee, waxaa hadal heynta suuqa kala iibsiga iyo xiisaha kooxahaba kaga awood badatay weeraryahanka ay isku kooxda yihiin ee Haaland.
Si kastaba ha ahaatee, naadiga Bundesliga ciyaarta ayaa qaadatay qorshe ay mid ka mid ah labadooda ku iibineyso kan kalena ay ku heysaneyso.
Safka Barcelona u matalaya ciyaarta caawa ee Real Valladolid oo lasoo saaray... (Pique oo...)
In Real Madrid la dhayalsanayo, Jurgen Klopp, Eden Hazard & iyo dhammaan waxyaabihii uu Zinedine Zidane kaga hadlay shirkii jaraa'id ee maanta